Ndi oru 9 wiil ndi oma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ninelọ ọrụ ụlọ ọrụ okporo ụzọ itoolu - azịza nkịtị
Ninelọ ọrụ ụlọ ọrụ okporo ụzọ itoolu - azịza nkịtị
Ndi oru 9 wiil ndi oma?
Otu n'ime ihe ndị kachasị amasị anyị na - anyị na - akwadoLọ ọrụ itooluEnduro S. Site na nkwugharị nchara nchara, ngwa ngwa Hydra ngwa ngwa, na alloy siri ikerim, ha na-fechaa, comparably oké ọnụ, na nkume siri ike. Dika osiri agba, Enduro S Hydrawiilịbụ nnọọ nnukwu.21.01.2020
Nke a bụ nnukwu ozi ọma, enwere naanị ihe m maara, amaghị m, dịka ụlọ ọrụ ịnyịnya ígwè 10,000 dị iche iche. Ma ọ bụrụ na ịnọghị n'ụgbọ ịnyịnya ígwè, ikekwe ị gaghị ama ihe dị iche na-emejọ n'etiti ndị ọzọ n'ihi na e nwere ọtụtụ n'ime ha, ọ dị mma? Chọpụta, e nwere ihe ndị dị ka rotary esorowo na e nwere ibu iche. Mana imirikiti mmadụ anaghị eche na ha na-eche banyere oge mbụ ha lere anya na wiil. ziri ezi, naanị ịchọrọ ihe anyị ga-akpọ ụfọdụ bangers.
Ọ dị mma? Nke ahụ dịkwa mma. Anyị nọ ebe a iji nyere aka na nke a n'ụzọ ụfọdụ. Abụ m Alex, Alex @ FI na Instagram.
Taa anyị ga-ekwukwa banyere ụfọdụ ụdị JDM kachasị mma maka wiil. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide ihe edoziri, amaghị m, enwere ike ụbọchị 30, 60, 90 na-esote, oge ụtụ na-abịa na ihe niile a. Echere m, Nkwado Wheel Star, www.fitmentindustries. com amaghi m ihe ozo m ga agwa gi. kedụ n'ụzọ, ọ bụrụ na ị na-akụ, nabata agbataobi. echefula ịdenye aha. ma tupu anyị emee, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị nwere ike imeri otu wiil nwere ụkwụ, anyị nwere asọmpi, asọmpi maka ọnwa nke Jenụwarị, njikọ nke nkọwa ga-adị n'okpuru, a na-anabata gị.
Ọ dị mma? Brandsdị JDM bụ site na nkọwa ọ bụghị naanị ụdị igwe kwụ otu ebe ndị Japan na-agba n’oké osimiri, kamakwa ụlọ ọrụ ndị m kwenyere na ha jikọtara ọtụtụ ụdị JDM ahụ, anya, na izi ezi ya n’ihi na e nwere ụfọdụ ụdị ọhụụ n’agha ahụ kwesịrị obere ịhụnanya. . Yabụ ịmalite na anyị ga-eji akara ngosi na mbụ rụọ ọrụ Wheels. N'ihe banyere akara Japanese ma ọ bụ JDM rim, Work Wheels bụ mgbe ọ bụla.
Always na mgbe niile, ụdị, abụwo onye mbụ na ị na-a isi player na egwuregwu kemgbe wiil ndị gbara gburugburu. O yikwara ka ha na ya na-arụ ọmarịcha ọrụ mgbe niile, ọkachasị n ’ọnọdụ ọnọdụ ihu ahịa azụ ahịa. Ọ bụrụ n’ị nụla gbasara anyị na-ekwu maka ọrụ, n’oge gara aga, ọ ga-abụ na ọ gbara ihe dị ka afọ iri ise.
Kemgbe ọtụtụ iri afọ, ọrụ esitela na ịbụ ụlọ ọrụ nke ga-ebu ụzọ gosipụta onwe ya, gaa na nke naanị ndị mmadụ chọrọ ịkwado ụdị aha ya na-anya isi na ọdịnaya na ngwaahịa nke o kere n'ezie. Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ha niile bụ nke izizi, dị iche iche ma nwee ụdị nhazi nke na-eme mgbe niile ka ha dị ka ọrụ. Dị ka ihe ndị ọzọ ya na-apụta, ọ dịghị mgbe ọ na-agbakụta ụdị ejiji ya ama ama.
Echere m na ha nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Mana ị nwere ike ịkọwa n'ụzọ ụfọdụ mgbe igwe ọrụ bụ wiil ọrụ. Offọdụ n'ime wiil ndị kachasị mma ugbu a ga-abụ Work Meister na Work Kwame.
Ha abụọ dị oke ọnụ, mana ha ga-enwe ezigbo ọfụma. Na mgbakwunye, ha nwere akara nke ịbụ ezigbo wiil nke ndị na-enweghị isi, nke mara mma ọfụma. Ọdịmma dị mma karịa ya, ọ dịkwa mma ịnwe ịnwe ma ị nwere ike itinye ya na ihe ọ bụla ma ọ na-adị mma mgbe niile n'ihe ọ bụla ma ọ nweghị onye ga-enye gị ọnya.
Ihe ọzọ na ndepụta ahụ ga-abụ akara US nke gosipụtara na nso nso a nke na-ebu ọtụtụ ụdị ụdị JDM ahụ mana yana usoro ọhụụ ọhụrụ. Na ime ihe n'eziokwu, nke ahụ ga-abụ Kansei Wheels. Kansei bụ akara ọhụrụ rim nke pụtara na Cris S nke nwere ọtụtụ ihe ahụ JDM na-eme na imepụta ma ka na-eme ọtụtụ n'ime ya, yana mbido na ihe nketa o nwere ike.
Ma nke ahụ bụ ebe ọ na-esitụrụ ike. Ka m kwusi gi ebe ahu, enwere otutu uzo i nwere ike isi mezuo onu ise. Tụkwasa m obi.
Anyị gbalịrị ya. Emere m edemede banyere ya, ọ jọgburu onwe ya. Ebere m ákwá, ha bere ákwá, ọ bụghị ezigbo oge.
Mana Kansei na-ewe ọtụtụ atụmatụ ndị ahụ siri ike ma na-ewebata ha na obodo na-arụ ọrụ, yana ọnọdụ na-agagharị agagharị, ma hapụ ya ka ọ gaa, nha na obosara na ihe ndị mmadụ chọrọ n'ezie. Kansei nwere ụdị nhọrọ ole na ole nwere KNP ọla kọpa nwere ike bụrụ ihe kachasị ewu ewu na-ajụ ọzọ gbasara igwe kwụ otu ebe ahụ, ọ bụ ebe a. Ọ gafeela ebe a, ọ dị mma? Nke a bụ KNP, ọ bụ wiilị Kansei.
Mana ha nwere roku, tandem ahụ, ha nwere ọhụụ ọhụụ - atụmatụ ụmụaka. Ihe kachasị amasị m banyere igwe kwụ otu ebe ndị a na ihe kpatara ha ji nọrọ na listi bụ eziokwu na akara ngosi aha si Kansei na eziokwu na ha dị mfe ịnweta, ogwe aka na ụkwụ iji nweta igwe kwụ otu ebe na-adị mfe ma na-arụ ọrụ dị ukwuu na naanị nwere ezigbo ihe nketa nke ndị Japan. Maka na mgbe ị malitere ikwu maka igwe kwụ otu ebe nke ndị Japan, ị na-akwụ nnukwu ego maka nke ọhụrụ ma ọ bụ na-ewe gị ogologo oge ịchọta igwe kwụ otu ebe ịchọrọ nke karịrị oke osimiri.
Na-esote na ndepụta ahụ, o doro anya na Die Volk na Gram Light. Kemgbe ụwa, JDM wiil na-efu nnukwu ego. Ọ dị m nwute.
Ma ụdị Volk na Gram Light ma kwesịrị ka anya na ndepụta a. TE37 n'ihi na ọ bụ TE37. Na Gram Ìhè n'ihi na ọ bụ ntinye-larịị version nke niile itule anyịnya igwe na gị nche anwụ.
Ihe anyị ga - achọ iji oge ka ukwuu nọrọ ebe a. N'ọnọdụ ọ bụla, Volk bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ na nke kachasị ọsọ iji mepụta ụfọdụ n'ime wiil ndị kachasị ike ruo ugbu a na igwe eji eme ihe nke na-egosipụtakwa ụfọdụ ịnyịnya ígwè ịgba ọsọ. Ha nwere ihe dika igwe njin igwe 10,000, obu ara.
Volk nwere aha maka mma na ọnụahịa ha nọ, ọ dịtụghị mgbe ha mere ihe na-ezughị oke dị ka ọ dị. E webatara gram gram n'ihi na ịchọrọ n'ezie ịchọta ụzọ ị ga-esi nwekwuo wiil n'ihu ndị ziri ezi, ọ rụpụtara nke ọma. Gram Ìhè dabara ọtụtụ nnukwu ụgbọ ala.
Ha nwere nnukwu ndozi, nnukwu ọrụ, ma dị ọnụ ala nke usoro ha niile nke na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịnweta. Odighi ka mmadu ise imara, odighi ka ndi otu puku dollar ise, ihe nile ekpochiri ma buru ha nile di njikere iga, imara ihe m na-ekwu? Na nke ikpeazụ n’ime ndepụta a ga-abụ ezigbo ụmụ nwoke ndị nwoke n’akụkụ n’ụzọ. Ndị bụ ụlọ ọrụ izizi mbụ ahụ.
Ulo oru anyi aghaghi ime akwukwo ihe omuma banyere ihe ndi ozo abughi nnukwu onye anyi na eme ihe. Mana nke ahụ dị mma, ọ dị mma. Anyị ga-eme ya otu ụbọchị.
Anyi ga ekwu okwu banyere Wheel Enkei, odikwa? Enkei ma ọ bụ Enkei bụ akara JDM dị ogologo karịa ọtụtụ nne na nna ochie anyị. Nke ahụ bụ otú ọ dị. Enkei bu ihe ahuru anya, odikwa? Ha mere igwe kwụ otu ebe ọhụrụ na nso nso a, mana amaara ha nke ọma maka ol 'RPF1, nke dị ihe dịka afọ 2.5, 25 afọ.
N'ihi teknụzụ na ọnụahịa, ọ dịtụbeghị mgbe etiri ha. Offọdụ igwe kwụ otu ebe ọhụrụ ha na-apụta, mana ọnụahịa dị ntakịrị karịa ihe ọtụtụ mmadụ dị njikere ịzụta. Das na Enkei amalitela ịhapụ ọtụtụ ngwa ahịa gafee.
Likemasị na ịme ya, mana gị, m na-ekwu igwe kwụ otu ebe OEM, nweta ọtụtụ ego karịa n'ahịa a, ọ dị mma? Ego ego maka Weds, Wed Sports, Advanced na ndị ọzọ. Enwere ụdị dị iche iche ebe ahụ mana anyị nwere naanị nkeji asatọ. JDM ụdị bụ a obere bit na-akpali mgbe ọ na-rim aghụghọ n'ihi na ị n'ezie ga-achọpụta ihe na-amasị gị ma ọ bụ ihe ị chọrọ.
Ha abughi uzo di ala na onu ogugu n’ebe nile. Mana ha nwere ihe kpatara ha ji akwụ ụgwọ ebe ha nọ. Yabụ kedu onye ị chere bụ otu n'ime ụdị JDM kachasị mma ebe ahụ? Gbanwee okwu n'okpuru ma mee ka anyị mara.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ ụdị mpempe akwụkwọ azụ, taya ma ọ bụ nkwusioru, ị nwere ike ịga n'ihu www.fitmentindustries.com ebe anyị nwere ihe niile gbasara, Work, Kansei, Enkei, Advan, Gram Lights, ma ọ bụrụ na ị bụ ọ bụghị n'ime ọnọdụ ụkwụ JDM nke ahụ dịkwa mma.
Anyị nwere ntakịrị ihe ndị ọzọ ebe ahụ. Kwesịrị ịlele ya. Ma ọ bụrụ na ị nwere ụgbọ ala azụmaahịa ị na-atụkwasịbeghị, gbaa mbọ tinye ya n'ihi na m ga-akpọbata gị na Instagram, ọ mara mma.
Abụ m Alex si Fitment Industries na m ga-ahụ gị mgbe e mesịrị, udo. (Egwu obi ụtọ)
Ebee ka emebere ụlọ ọrụ 9 rim?
Busch, Busch, BuschBusch, Busch, Busch, Busch.- Achọrọ m ka ọkụ Busch, Copenhagen ọzọ, mgbidi ndị ọzọ na-esote mba ndị ọzọ, V8 ndị ọzọ, ndị ọzọ anaghị akwụ ụtụ isi anyị, ọtụtụ ngwa ọgụ ndị America iji kwuo maka ụlọ ọrụ ọzọ a. (Rap Music) Nnọọ na Cragar.
Nwoke ahụ, akụkọ ifo, akụkọ banyere Cragar Wheels. Any nwere onye n’ime unu n’eziokwu jụrụ maka ya? Mba, gịnị kpatara anyị ji eme nke ahụ? Ọfọn, n'ihi na Klassen anaghị aza ozi ịntanetị anyị. Anyị ga-ekwu maka ụdị ika onye ọrụ ụgbọ anyị chọrọ ka anyị kwuo maka ya. Ya mere, nke ahụ bụ ihe gbasara mmadụ abụọ na-ajụtụla akụkọ gbasara Cragar Wheels.
E hibere Cragar Wheels na 1930 site na Crane Gartz wee bido site na iji ihe ọ juiceụ juiceụ ugo ọhịa na ntutu ihu America. Companylọ ọrụ a mụrụ nke ọma ma mụọ ya n'oge nsogbu nke nlaazu. Cragar Wheels bụ ụlọ ọrụ na-emeghị wiil rue mbubreyo 1950.
Cragar mechara me Ford Model A bụ ihe ngosipụta na ihe niile metụtara ụgbọ elu n'ihi na n'oge ahụ, ha bụ n'ezie ndị amabeghị ihe ọzọ m ga-eme. Crane esoro Harlan Fengler rụkọọ ọrụ iji soro ụlọ ọrụ rụọ ọrụ iji banye na ọnọdụ ụgbọ ala na-esote ahịa. Mana n'ihi na ihe niile gara nke ọma, Crane chọrọ nnọọ ime ihe ọ ga-emeli.
sram ugo cassette ibu
Gịnị ka Cragar pụtara? Ọfọn, nke ahụ dị mfe ozugbo ị kwaturu akwụkwọ ozi atọ mbụ nke mbụ na aha ikpeazụ ya. Get nweta Cragar. N'ihi na Cragar nwere obere akụnụba nke, ọ bụrụ na ị maghị, hiwere na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ.
Cragar nwere ike ịzụta ngwa ọrụ, iheomume na igwe ha chọrọ iji mepụta ụdị ọrụ ọ bụla dị mma, teknụzụ ma ọ bụ na -emepụta ngwaahịa ọ bụla ị ga-eche. Cragar mere nke ọma, mana ọ bụghị nke ọma. Ọ naghị eme nke ọma iji lanarị Oké Ndakpọ Akụ.
Na 1932 aha Cragar mechara daa ma enweghị ọkụ ga-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ. Mana ọ teghị aka, n'ihi na na 1933, George Wight nke Bell Auto Parts kpebiri ịzụta aha Cragar. Wight bụ obere nwoke nke na-eme ihe dị iche iche ma tụfuo akụkụ site na ebe a na-ere ihe iji wuo usoro agbụrụ ya, na - (na-akọwa) Enwetara m biya na akpịrị m.
Onweghi ihe dịka 12 ounces nke America na mmiri ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụ acid m reflux. Enweghị m ike ikpebi ihe ọ bụ. Nwere ike ịbụ abụọ.
Ugbu a, ihe niile mere na Southern California, ebe ọtụtụ ntọala ịgba ọsọ mbụ malitere. Mana George Wight nwere ihe Cragar chọtara talent dị ịtụnanya. See hụrụ, n'ihi na Cragar na-anwa ịme ngwaahịa, Wight pụrụ wee gbalịa ịchọta ndị nwere ike ịgbanwe ụdị a ka ọ bụrụ ihe dị iche.
Na tupu ịmara ya, ha bụ ụmụaka ọhụrụ na-ekpo ọkụ na mgbochi. Ha nwere ndị na-eme ihe nkiri ama ama, ndị egwu ama ama, ndị nrụpụta ọkacha mmasị na ndị ọrụ igwe, yana ndị ọkwọ ụgbọ ala na-abịa Bell Auto Parts n'ihi talent Wight hụrụ mere akụkụ ndị a niile dị elu. Na Bell Auto Parts aha malitere itolite.
Maka na ihe niile n’arụ n’oge ahụ, ọ bụ ọnụ ka ọnụ. Ọ bụrụ n’inwe ndị niile ama ama na ndị ọgaranya niile na ndị niile maara ịkwọ ụgbọala n’otu ebe, ị ga-adị mma maka onwe gị. N’akụkụ ka ukwuu, aha Cragar ahụ dịkwa n’akụkụ.
Bell Auto Parts nọgidere na-emetụta ha, mana maka ọtụtụ akụkụ ịzụta mbụ emere maka ihe atụ na igwe. O nweghi ihe jikọrọ ya na aha ahụ, ma ọ bụ gịnị kpatara ya? ị maara na ha mere ihe niile. Dịka ihe ọ bụla, ị maghị na ịchọrọ ihe ruo mgbe ịnweghị.
Ruokwa mgbe George Wight mesịrị nwụọ na 1943, aha Cragar ahụghị ìhè dị ukwuu. N'ezie, ọ bụ naanị na 1945 ka aha ahụ Cragar malitere inweta aha ya ọzọ na otu nwoke aha ya bụ Roy Richter. Ugbu a mgbe ọ dị obere, Roy bụ onye na-acha uhie uhie nke na-achọ ịba agbụrụ niile.
Mana nke ahụ bụ ihe Roy maara nke ọma. Ọ dị mma ịbụ onye ọhụụ. N'ezie, a na-ewere ya dịka otu n'ime ndị nrụpụta kachasị mma n'oge ahụ.
Mgbe Bell Auto Parts kpọpụtara ya ka ọ rụọ akụkụ na igwe site na mmekọrịta Cragar, Roy ka na-amalite ịwepụ ma ya na ụfọdụ ọrụ kacha mma ga-enweta na Southern California. Maka ọtụtụ mmadụ, Roy bụ ihe kpatara Bell na Cragar ji bụrụ ndị amaara nke ọma site na oge nsogbu nke 1940 na afọ ndị 1950. Ọ bụ mgbe Wight mechara nwụọ ka Roy kpebiri na ya chọrọ ịgbazite aha Cragar na Bell Auto Parts, nke gafere ọghọm na mgbada na ihe niile dị n'etiti.
Mgbe ahụ ihe na-atọ ụtọ mere na 1945. Anyị meriri n'agha ahụ, kedụ ihe ịtụnanya bụ agha ahụ ga-ewepụta ụdị uto ime azụmaahịa na afọ ojuju mba, bụrụ onye America ma drinkụọ ọkụ n'ọhịa. Ikwu okwu banyere V8s na igba oso ugbo ala na okirikiri ma ghara ikwusi (ikwu okwu) banyere ihe ndi ozo dika ugbo ososo na umu nwanyi mara mma n’ihi America. (Metal hama) Whonye na-eti mkpu n'ebe ahụ ma ọ bụghị gị? (Hagwè hama) - N'ezie ekwekọghị.
Oh Chukwu. (Laughs) Yabụ, ị hụrụ, obodo ndị akpakanwu abaala n'ike n'ike mgbe WWII gasịrị. Ndị America chọrọ inwe ihe jikọrọ ha na oge niile ha nwere na nnwere onwe - ee - inwe nnwere onwe na ịbụ ndị America na ihe ọma ndị ahụ niile, ha chekwara ihe ọzọ ha nwere ike ime karịa ịwulite ụgbọ ala ngwa ngwa na-aga n'ihu aha dị ka Vic Edelbrock , Sr.Phil Weiand, Ed Iskenderian, Stu Hilborn, Phil Remington sitere na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe wee malite ịkwanye ihe niile, ihe a ga-eme na azụmaahịa, nke ọma, ngwongwo akpaaka Mgbe ahịa ahụ gachara ụzọ abụọ ma ha abụọ abụghị ihe egwuregwu ahụ ma ọ bụ nke ọma oge ahụ.
Otutu ndi mmadu choro ka igbutu ahihia nchara ha, gbanwee ihu ha, wee kpoo ha tupu ha etinyeghachi ha na ugbo ala, yabụ i nwere ike inweta onu miri emi. Ma mgbe ahụ ndị a sere ha, ha ese ha, ha were chrome kpuchie ha na nke ahụ bụ ole azụ azụ azụ ahịa gachara mgbe ahụ. N'oge ahụ, Roy chọrọ ihe na-ajụ oyi ma ha chere, sị, 'Ọfọn, ọ bụrụ na ọ dị? nwere ike ime ya, ọ bụ ha. 'ha kpebiri iji aha wheel Cragar.
Akpọrọ m asị ya, mana ọ dị nwute na m na-echegharị ndị mmadụ. Ndị nwere ụgbọ ala akwara ji egbugbere ọnụ chrome pụta tupu ha emee ọtụtụ, tuner ọbụladị chere ya. Na 1964, ndị kasị ọmarịcha anyịnya igwe mgbe kụrụ anụ ụlọ ahịa na eze pụtara, S / S.
Ọ bụrụ na ịmaghị ihe S / S bụ ugbu a, ma ọ bụ biri n'okpuru nkume. S / S dị n'eziokwu, ikekwe ọmarịcha igwe kwụ otu ebe na oge niile. Dị ka ụlọ, nke mba, ihe niile dị n'etiti, ma ị bi na Europe, ma ị bi na America, ma ị bi na Australia ma ọ bụ Canada 90% nke ndị na-ekiri anyị, ọ bụ ihe kachasị ewu ewu mmadụ nwere ike ịzụta maka igwe kwụ otu ebe.
N'ezie, n'okpuru aha Cragar, R oy Richter, naanị ihe ọ chọrọ ime bụ ịme igwe kwụ otu ebe nke dị ọnụ ala ma maa mma. N'ihi ahịa ahịa kụrụ ọnụahịa ahụ, ha sụrụ ngọngọ n'elu ọla kọpa, ihe kachasị aga nke ọma ruo taa. A na-ahụta S / S dịka otu n'ime wiil kacha agba agba n'oge niile.
Ọ na-atụle otu n'ime ihe ndị kasị ihe ịga nke ọma wheel niile oge na ọ bụ ma eleghị anya naanị otu ihe kasị mkpa mere onye ọ bụla maara banyere anụ ụlọ itule anyịnya igwe na 1960, United States '70s na 80s. N’oge ochie, ị dara ngwọrọ ma ọ bụrụ na i nweghị craga. Ugbu a, ihe setịpụrụ wiilị a na ndị ọzọ na-agba ụkwụ mgbe ahịa gachara bụ na ọ na-anọ ogologo oge.
A na-ejikọ ọnụ ọnụ ise ahụ na gbọmgbọm ahụ n'ụzọ dị iche karịa onye ọ bụla ọzọ merela. Hụrụ, ha na-ejikarị kposara na bolts na ihe ndị yiri ya dị arọ ma adabaghị adaba na ijigide ike nke ụkwụ na-aga ahịa. Ihe Cragar S / S nwetara bụ ịme usoro ihe eji egwu egwu. nnoo a n'ezie ụzọ dị mfe iji chekwaa a otutu arọ, ịnọgide na-enwe adiana uka, na-a mma itule igwe kwụ otu ebe.
O nwere oge mgbe ụkwụ nke mbụ gwụrụ nwere obere ntụpọ ọ chọrọ ịdọghachi n'aka ndị enyi ya ka o nwee ike idozi ya, yabụ ọ bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke. Anyị na-ekwu maka ịkọwa ihe ịchọ mma nke nwoke a na-achọghị. Nke ahụ bụ otu pụrụ iche Roy na ịnyịnya Cragar S / S siri dị.
N'ezie, ọ na-ewe iwe n'iji ndị otu ya na-agba ọsọ ọsọ ọsọ maka ha n'ihi na ihe Roy kwuru abụghị nzube ha bu n'obi na njedebe. Roy gbalịsiri ike ma gbalịsie ike ruo ogologo oge wee gaa n'ihu na-enwe ihe ịga nke ọma, mana ọ na-ewepụ ihe wiil ndị ahụ na-ekwesịghị ime ogologo oge; ọ bịara doo anya na Cragar chọrọ ịpụta na impeller mere maka ọsọ ọsọ ọsọ bụ. Ọ bụ mgbe ha batara na ngalaba mag nke igwe kwụ otu ebe ha na US ka ha malitere ime ya.
Ma Cragar wiil mara mma nke ọma maka naanị aha ọjọọ S / S. Site n'ebe ahụ, Cragar mepụtara wiil ndị ahụ ga-agba otu n'ime ụgbọ ndị kachasị ọsọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 666 mph, Blue Thunderbolt, the Blue Flame. Kedu ndị na-ewepụta aha ndị a? Cragar guzobere ụlọ ọgbakọ ise nke abụọ wee mepụta klọb nke abụọ na nke ise n'ihi Cragar kpebiri na ọ bụrụ na mmadụ enwee isi mmalite nke ịme ụgbọ ala ngwa ngwa, ha chọrọ ka wiil ha dị na ya.
Na 1971, ụlọ ọrụ Wynn Oil Company zụtara Cragar dị ka onyinye ndị nrụpụta nke afọ maka ịme ngwaahịa ụfọdụ kachasị mma n'oge ahụ. Ọ bụghị rue mgbe 1983 mgbe Roy Richter nwụrụ, nke hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'ọgba aghara na-anwa ịmegide aha ahụ dịka m, mana ọ bụghị ọtụtụ agbanweela na aha Cragar n'etiti 80s na taa. Ha mechara zụta Carlstar na 2014 ma weghachite ya obere oge.
N'ihe banyere imepụta ọhụrụ, ha enweghị ọtụtụ na n'ezie, ị gaghị enwe ọtụtụ n'ihi na aha Cragar anaghị emetụta ihe ọhụụ. Ejikọtara ya na oge agafeela na ụlọ ọrụ na-adịkwaghị. Ọ bụ ezie na enwere ndị na-agba ọsọ ụgbọ ala Cragar, ha na-eme ya.
Ọ bụ site nostalgia ma eleghị anya ọ bụghị ịkwanye ụdị ahụ na ihe na-eme ka igwe kwụ otu ebe dị ọhụrụ. Onweghị ihe dị njọ na nke ahụ. A ga-enwe ndị ga na-agba ịnyịnya ígwè Cragar n’ihi na ọ bụ igwe kwụ otu ebe.
Mana ọ dị nwute na enwere ike ịnwe ụlọ ọrụ dịka Cragar ogologo oge. Nke ahụ bụ ihe niile anyị nwere banyere akụkọ ịgba ọsọ egwuregwu Crager. Anyị nwere olile anya na ị nwere ọ givingụ ịnye uwe elu na ọkọlọtọ na mgbakwunye na nke anyị nyere n’izu gara aga.
Ihe ị ga - eme bụ ịhapụ ikwu banyere ụgbọ ala gị. You ga-ahapụ ikwu maka ihe ụgbọ ala gị chọrọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa anyị ihe anyị ga-ekwu maka izu na-abịa, nwee ọ happyụ na ịme nke a, onye meriri n'izu gara aga anyị, Mario nweta m ugbu a, ga-apụ, ka anyị lee ebe a. Naanị m ga-aga, iPhones anaghị amasị m.
Ọ bụ ụdị nke dị egwu. Onye mmeri na-esote nke izu a na-aga Tito Lopez. Tito Lopez, na-ekele gị maka mmeri.
Ga - achọ izitere anyị email na shop@fitmentindustries.com, ka anyị mara ụdị uwe elu ịchọrọ. Anyị ga-ejikọ gị n'ezie.
M ga-atụfu ekwentị a, mana ọ ga-agbaji. Abụ m Alan si Fitment Industries. Ka ahụ ma emechaa.
Ego ole ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe Nine Nine?
EmepụtaraNA NTỌ AKW INKWỌ NA ASHEVILLE NC
Arụpụtarama rụọ aka na Asheville, ụlọ ahịa NC, ngwaahịa ọ bụla i9 bụmerejiri gị na njem gị n'uche. Site na nhọrọ nke nhọrọ dabara adaba, ogige kachasị arụ ọrụ, usoro wiil na akụrụngwa, yana nhọrọ nhọrọ agba 11, anyị nwere akụkụ na agba iji pịa ịnyịnya gị.
nri ike mita
Wheelsgbọ ịnyịnya ígwè na-abịa na hubs?
Ha nwere ntaneti na ahịrị n'ime, na n'akụkụ draịin ma ọ bụ eri maka cogs ma ọ bụ 'freehub,' na ụyọkọ gia (akpọ 'cassette') na-arịgo. A na-ere kaseti iche iche. Ndi anyi niilewiil biana mmahubsna-wuru na-adịgide adịgide, mfe ọrụ na ibu ezigbo.
O doro anya na anyị niile na-agba ịnyịnya (egwu hip hop) na wiil, mana ole ka ị maara banyere igwe kwụ otu ebe a? Ọfọn ke ibuotikọ emi anyị ga-eme a wheelie na mgbe ahụ anya na ihe dị n'okpuru gị, ebukọtala bụla akụrụngwa na-ele anya na wiil na ha na-abịa dị iche iche nha. Ha dị sentimita iri abụọ na anọ. Ha dị sentimita 26.
I nwere 27 na ọkara wee buru ibu, wiilị 29-inch, nke ahụ dabere na rim dayameta. Yabụ, ị nwere rim ebe a. Mgbe ahụ ị nwere ọnụ gị.
Nwere ike nweta shoveled ndị a. Nwere ike ime ka ha kwụrụ ọtọ, anyị ga-abanye na nke ahụ n'otu oge, mgbe ahụ n'ezie ị nwere akụkụ etiti, nke ahụ bụ ebe ahụ ebe a. Nwetara biarin n'ebe ahụ, wee bụrụ ihe a ebe a, nke a bụ na ị nweghị oghere.
Dịkwa mma, nke mbụ niile ka anyị lee anya na ihe ezigbo axle widths ndị n'ógbè nlekọta ọrụ. Ọ bụrụ na ị were ụkwụ ihu ị nwere ọkọlọtọ QR, yana nke a buru ibu, ị nwere ike ịhụ n'ezie na ọ bụ 15 mils in dayameta. You nwere ike nweta na na a 20 mil kwa, na mgbe ahụ ị nwere agbam ume nhọrọ nke bụ 110mm n'obosara, 15 ma ọ bụ 20 dabere na gị ndụdụ.
Ka anyị werekwa ụkwụ na-aga, agbanyeghị, enwere ntakịrị nhọrọ ebe a, ma ọ dị ntakịrị gbagwojuru anya. Ya mere, ị nwere ike ịhụworị na nke a sara mbara karịa itinye cassette na wiil ahụ n'onwe ya, mgbe ahụ ị nwere ike nweta nke a site na ịhapụ ngwa ngwa nke na-abụkarị 135 wee nweta nke a na 142 yana na 148 nke bụ oke Boo nhọrọ bụ, ma n'ihi na ndị a nnukwu downhill anyịnya igwe ị pụrụ n'ezie ịchọta a wider ehiwe ohere na dị nnọọ na-enye ya a bit ọzọ ike na ikwesi olu ike. Ha ga-abịa na 150 mils na ọbụna 156 mils ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ndị a ọhụrụ anyịnya igwe.
Yabụ na ọ bụ nhọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ igwe kwụ otu ebe ọhụrụ, nke a bụ otu n'ime isi ihe ị ga-eche maka ya n'ihi na ịchọghị ị nweta oke a. Ọ dị mma, ya mere, ihe m chọrọ ikwu maka ugbu a bụ freewheel, na d obere ihe a bụ ihe na-eme ka wiil ahụ gaa n'ihu, mana na nke a, achọrọ m ịmalite site na ikwu maka nha dị iche iche ị nwetara. Nwere ike nweta ya na a SRAM XD ọkwọ ụgbọala ahụ, nke a bụ nke a, ma ọ bụ ị nwere ike nweta ya na Shimano freewheel nke nwere ntakịrị ogologo na-agba agba ala niile ahụ freehub, mana ihe na-adọrọ mmasị banyere ihe a bụ pawls, ma ndị a bụ ntakịrị ihe ebe a bụ n’ezie n’elu isi-iyi, ha ga-agba n’iru na-aga, ma mgbe ejikọrọ gị na ratchet system ahụ, i nwere ike mee ya ọsọ ọsọ.
Mkpebi kachasị mkpa ị ga-eme bụ akara nke ị họọrọ, ọ dabere na ihe a. Can nwere ike ịhọrọ nke emere carbon ma ọ bụ aluminom. Ọ bụrụ na ị gaa maka nke aluminom, ọ ga-adị ọnụ ala karịa.
Na-echekwa nnukwu ego ma ọ bụrụ na oge ụfọdụ ị ga-eji dochie rim. Otu ihe ọtụtụ mmadụ amaghị n'ezie bụ na ọ bụrụ na ị rọọ rim a, ọ nwere ike ịzọpụta gị na taya taya, mana eriri carbon, nke ahụ bụkwa ihe m ga-eme na ọhụụ. Enwebeghị m ọtụtụ ihe, mana ọ na-emezi njikwa igwe kwụ otu ebe ma na-eme ka ọ sie ike karị, ị na-agbanye igwe kwụ otu ebe na akụkụ ndị ahụ.
Have nwere mmezi adịgide. Nsogbu a na-aga site na taya n'ezie. Ọ gaghị agagharị, ọ dịkwa mfe karị ịkwado, mana ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ oghere bụ na mgbe ịzụrụ wiilị ọhụụ, gbaa mbọ hụ na ị ga-ebu ha.
chris arọ ọnwụ Ihọd
Nke a ga-abụ otu n'ime nkwalite kacha mma maka igwe kwụ otu ebe. Ma ihe ndị rim, ihe m chọrọ ikwu okwu bụ nke a esịtidem rim obosara ebe a. Ihe ị ga - ahụ bụ ma ọ bụrụ na inwere nke sara mbara karịa mgbe ahụ ọ ga - agbanwe igwe na - azọ ụkwụ.
Ha nwere olu buru ibu karị. Yabụ na ọ ga-eme ụfọdụ obere bumps ahụ, ọkachasị mgbe ị na-anyafe ebe ị na-awagharị n'okwute, mgbe ahụ ị ga na -eche onye ọzọ enwe. Onwe m, ọ masịrị m ịnwe oghere buru ibu, karịchaa mgbe m na-agba ịnyịnya Duro ma na-agbago elu rim, ị nwere profaịlụ taya ka ukwuu nke nwere ike ibute mgbapu.
N'ihi ya, dị nnọọ nnwale. Mee nyocha ma chọpụta ihe dabara gị n'ụgbọ ịnya ụgbọ ala. Ọ dị mma, ya mere, anyị kwuru maka nhọrọ nhọrọ a.
Anyị gbakọtara ebe a na-akọwara gị akụkụ ọ bụla nke gụnyere. Enwere naanị otu ihe anyị kwesịrị ikwu maka ya na nke ahụ bụ ọnụ, ụmụ okorobịa ndị a kekọtara ya ọnụ ma mee ka ị nwee ụkwụ ụkwụ siri ike. Ihe m chọrọ ikwu banyere ya bụ, ọ bụ omenala J-gbagọrọ agbagọ na Tulee ụdị a ebe a bụ ihe kwụ ọtọ ma ị ga - ahụ ọnụ na - agam n’ihu site na ebe a na - agha ya na ụzọ niile.
Yabụ ọ bụrụ na ị gbarie otu ite ndị a, ọ ga-anwụrịrị iji dochie anya, mana enwekwara ụfọdụ azụmaahịa. Pụrụ n'ezie ịhụ ndị a Mkpọ na-araparawo n'ime ehiwe ma ọ bụ ọnụ ara mgbe ụfọdụ na ha nwere ike ịbụ nnọọ ike n'ezie ikesiike ka e meere; na mma mma na nkedo kwụ ọtọ, ha dịtụ mfe idozi ma dozie, mana J-Bend bụ ụdị ọdịnala, dị mfe ịme, mana ọ nwere adịghị ike ya. O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na ị mebiri okwu kwuru ebe ahụ na nke ahụ bụ ihe nkedo ahụ kwụ ọtọ na-ewepụ, ma ọ bụrụ na m bụ gị, mgbe ị nwere ike ịme wiilị omenala wee chọta ebe ga-adaba na mkpirisi ahụ kwuru wee mee ya.
Odi mma nke olile anya na a ga-akọwa wiilị ahụ. Onwere otu ihe m leghaara anya, echekwara m na nke ahụ bụ ọnya ahụ. Eji m n’aka na ị ga-atụtụ ya ma jụọ ajụjụ ole na ole gbasara ya.
Ọfọn, ị maara na ha na-aga ebe a maka ọla ma ọ bụ akwa ara, na ihe dị jụụ bụ na ị nwere ike ịchacha egwuregwu ndị a na ebe a. ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ anodized na igwe kwụ otu ebe. Echere m na m kọwaara ihe niile.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko hapụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru ebe a, anyị ga-eme ike anyị niile ịza ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịlele ụfọdụ edemede sitere na GMBN wee hụ na ị pịa aka na ụwa a n’ihi na ịgaghị atụ uche onye ọzọ wee pịa ebe ahụ iji chọpụta ma ọ bara uru ịkwalite wiil gị. Pịa ebe ahụ iji mụta otu esi agbakọta ma họrọ wiilị ọhụrụ, wee nwee naanị ihe abụọ fọdụrụ ịme.
Mgbe ịchọtara nke a bara uru, kekọrịta ya nye ya isi mkpịsị aka ya.
Olee otu esi eme ebe a na-eme ugbo ala?
Na njedebe kachasị dị ala nke ụlọ ọrụ ahụ,hubsdịmeresite na mpempe ígwè atọ - iberibe abụọ maka flanges ndị a na-ekwu okwu na otu ọkpọkọ n'etiti. N'etiti ọnụahịa dị n'etiti na-anọdụ n'otu aluminomhubs. Enwere ike imezi ha ma obu buo ha site na ngwota nke alloy.Jenụwarị 30 2017 Nọvemba
Kedu ka m ga - esi mara ihe igwe kwụ otu ebe ịzụta?
Dabere nanke gitaya dayameta (700, 29, wdg) na ogwe ụkwụ wiil, ọtụtụ obosara ga-adaba. Naihegabiga-ókètayaon extra-skinnyrim, ọmụmaatụ-kataya nwere ike ọ gaghị adaba. Fọdụwiilndepụtakanso nke taya taya dakọtara.
Hublọ nyocha ndị ka mma na-eme mgbanwe?
Hubs na-emennukwuihe dị ichemgbe ọ na-arụ ọrụ nke igwe. Nahubsmepụta njikọ dị n'etiti wiil na okpokoro nke igwe kwụ otu ebe, nke pụtara na ngwa ngwahubs na-ememaka igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebehubsnwere oke irighiri ihe n'ime agbụrụ ndị na-ejide bọọlụ, igwe kwụ otu ebegajiri nwayọ na-agba ịnyịnya.
Kedu ihe hub na-eme na wiil?
Gịnị ka a ehiwenzukọmee? Nke mbụ, nawheel ehiwenzukọ na-eme gịwiilmmasị gị ụgbọala na-enye ohere nkewiiliji gbanwee kpamkpam na-enyere gị aka iduzi n'enweghị nsogbu. Nawheel ehiwenzukọ dịkwa oke mkpa maka sistemụ mkpọchi mgbochi gị (ABS) yana sistemu traction (TCS).
Gịnị bụ a ehiwe na igwe kwụ otu ebe?
Naehiwebụ akụkụ bụ isi nke gịigwe kwụ otu ebewiil (n'ihu na azụ), nke na-ejikọ na wiil nke wiil ahụ site na nkwupụta na site na nke a na-etinye axle, na-eme ka wiil ahụ wee nwee ike ịtụgharị na nkedo abụọ. Nke anyi kacha mmaigwe kwụ otu ebeịzụta ndu bụ ebe ichota ihe!Eprel 30 2020
Kedu ihe igwe eji agba ịnyịnya n'okporo ụzọ?
29 ″ / 700c (ISO 622 mm)
Ọkọlọtọ nke oge an'okporo ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebenwere ISOdayametanke 622 mm ma zoro aka na ya 700c (ezi uche, nri? / s).Ọnwa asaa 17. Dec 2019
Kedu ụdị wiil ụlọ ọrụ itoolu na-eji?
Ninelọ ọrụ nke itoolu ekewaala ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe site na wiilị igwe kwụ otu ebe. The side side got the sleek Torch hubs with straight pull, bladed steel spokes iji mee ka ha dị ka ikuku dị ka o kwere mee… ọkachasị na gburugburu ha carbon ọhụrụ. Ogige igwe kwụ otu ebe dị na ugwu jiri mgbịrịgba alumini ha jiri mbinye aka wee nwee nnukwu flanges.
Kedu ọnụahịa ụlọ ọrụ itoolu gravel wiil?
MSRP bụ $ 2,300 ma ha nwere oke ịgba ọsọ 240lb (110kg). Akwadoro ụdị oke taya dị 33-55mm n'obosara. Ulo ULCX235 TRA na-enweta alloy alloy ma na-abata ka ọkụ dịka ụdị carbon maka ihe dịka ọkara ọnụahịa ahụ. You nweta nhọrọ abụọ, 700c ma ọ bụ 650b.
Ego ole ka otu ụlọ ọrụ itoolu na-efu?
Ikwu rim arọ bụ 355g, zuru ezu wiil bụ 600g F na 725g R (1,325g ngụkọta). Ihe niile dị na 12mm na axles, ndị na-anya XD na ihe ndị na-enweghị isi, mana wiil ndị ahụ ga-abịa na teepu na-enweghị eriri na eriri ịwụnye awụnyere. MSRP bụ $ 2,300 ma ha nwere oke ịgba ọsọ 240lb (110kg). Akwadoro ụdị oke taya dị 33-55mm n'obosara.